“Bixitaanka Pogba ma noqon doonto khasaara weyn ee soo gaarta Man United” –Scholes – Gool FM
“Bixitaanka Pogba ma noqon doonto khasaara weyn ee soo gaarta Man United” –Scholes
(Manchester) 20 Sebt 2019. Halyeeygii hore kooxda Manchester United ee Paul Scholes ayaa aaminsan in haddii uu baxo xiddiga qadka dhexe ee reer France Paul Pogba aysan khasaara weyn ku noqon doonin naadiga reer England ee Red Devils.
Pogba ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo safka Manchester United inta lagu gudi jiray suuqii kala iibsiga xagaaga ee lasoo dhaafay, kaddib markii uu xiiso weyn ka helay kooxaha Real Madrid iyo Juventus.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Paul Scholes waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Bixitaanka Pogba ma noqon doonto khasaaro weyn, mana u maleynayo in awoodiisa jireed ay aheyd mid cajiib ah xilliyadii lasoo dhaafay, iyo sanadihii uu ku soo qaatay kooxda Manchester United, ma uusan u ciyaarin doorkii laga doonayay kulamo badan ee muhiim ah”.
“Waxaa iska cad in Pogba uu doonayo ku biirista kooxda Real Madrid, laakiin waxaan arki doonaa waxa dhaca mustaqbalka”.
Si kastaba ha noqotee, Pogba ayaa wuxuu bar-tilmaameed koowaad u ahaa macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane inta lagu gudi jiray suuqii kala iibsiga xagaaga ee lasoo dhaafay, laakiin maamulka Manchester United ayaa waxay iska diideen fikirka ay kaga maarmayaan adeegiisa.
Rio Ferdinand oo kula taliyay Harry Kane inuu ka tago Tottenham, si uu ugu biiro….
RASMI: Mid ka mid ah xiddigihii ugu caansanaa Man United oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaarista kubadda cagta